Buugga Isticmaalaha Haylou GT2 - Manuals +
Buugga Isticmaalaha Haylou GT2
Posted byfazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Leave a comment on Buugga Isticmaalaha Haylou GT2
Bogga ugu weyn » Haylou » Buugga Isticmaalaha Haylou GT2
Tusaale: Haylou GT2
2 Waa maxay sanduuqa
3 Sida loo Xiro
4 Sida Loo Xukumo
7 Qaabka Ciyaaraha
8 Habka Mono
9 Eedee Kiiska
11 Warshad dayactir maalinle ah
13 Dejinta Warshadda
14 Audio kaliya wax soo saarka ka soo maqalka hal
15 Dhibaatooyinka kale ee lacag-bixinta
16 Ka dambeeya & Taageerada
16.1 Buugaagta la Xiriira
Waa maxay sanduuqa
Dhegaha * 3 lammaane (dhegaha dhegaha dhexdhexaadka ah ayaa la saaray), dhegaha, dacwadda lacag bixinta, fiilada lacag bixinta, buuga isticmaalaha.
Halbeegyada Aasaasiga ah (dhegaha)
Baaxadda hawlgalka: 10m (meel bannaan oo aan caqabad lahayn)
Awoodda batteriga: 43mAh (dhegaha keliya)
Waqtiga lacag bixinta: qiyaastii. 2hr
Waqtiga hadalka: qiyaastii. 3.5hr
Waqtiga sugitaanka: qiyaastii. 150hr
Halbeegga gelinta: 5V 100mA
Nooca bateriga: li-ion
Nooc Bluetooth ah: v5.0
Halbeegyada aasaasiga ah (kiiska xukun)
Halbeegga gelinta: 5V 500mA
Halbeegga soosaarka: 5V 150mA
Waqtiga sugitaanka: qiyaastii. 4 bilood
awoodda Battery: 380mAh
Fadlan ku hagaaji Mic dhinaca afkaaga si aad uga hesho khibrad wicitaan wanaagsan.
Sida Loo Xukumo
Markii ugu horreysay ee aad isticmaasho, fadlan ka saar istiikarada kiiska ka dib kor u qaad dhagaha.
Ka soo qaado dhageysiga dacwada si aad ugu shubto. Haddii dhagaha maqalka ay ka baxsan yihiin kiiska, ku hay MFB 1.5s si aad ugu shido (LED wuxuu u dhalaalayaa 1s).
Dhegaha dhegaha ku furi kiiska si ay uga itaal roonaadaan. Ku hay MFB 4.5s si aad u awood u siiso. (Laydhka wuxuu u ifayaa casaan 2s ah).
Xiriirinta otomaatiga: waxay ka qaadan doonaan laba dhegaha dacwada kiiska, si otomaatig ah ayey u shaqeyn doonaan isla markaana iskula jaan qaadi doonaan 3s. Markay LED-ka dhagta midig uu si tartiib tartiib ah u biligeeyo, raadso Haylou-GT2_R oo taabo taleefanka gacanta si aad ugu xirto labada dhegaha ee taleefanka gacanta.
Haddii dhagaha maqalku ku guuldareystaan ​​inay ku xirmaan taleefanka gacanta, fadlan dib ugu soo celi kiiska oo ku celi tallaabooyinka kor ku xusan.
Earbuds-ka ayaa si otomaatig ah ugu xirmaya aaladdii ugu dambeysay ee diiwaanka isku xirnaanta, haddii ay jiraan. (Kulliyadda Bluetooth waxay u baahan tahay in la hawlgeliyo
Fiiro gaar ah: GT2 ayaa loo dajiyay warshad kahor inta aysan dhoofin.
Isku xidhka buugga: Awoodda o dhegaha wax lagu dhejiyo ka dibna gacanta ku dul saar iyaga. Earbuds-ka ayaa si otomaatig ah iskula jaan qaadi doona marka LED-ka dhagaha bawdada midig uu si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u iftiimaya Taleefanka gacanta, ka raadi GT2_R oo taabo si aad ugu xidhato labada dhagaha ee taleefanka gacanta.
Xiriirka otomaatiga: qaado dacwada dhagaha midkood. Dhagaha maqalka ayaa si otomaatig ah u shidi doona kadibna LED-ka ayaa si tartiib tartiib ah u liiqayn doona. Taleefanka gacanta, ka raadi Haylou-GT2_R / L oo taabo si aad ugu xidhato dhagaha maqalka taleefanka gacanta.
Earbud ayaa si otomaatig ah ugu xirmi doona aaladdii ugu dambeysay ee diiwaanka isku xirnaanta, haddii ay jiraan. (Kulliyadda Bluetooth waxay u baahan tahay in la hawlgeliyo).
Fiiro gaar ah: waxay kugu qaadan doontaa waqti dheeri ah dhegaha bidix si aad uguhesho moobilka.
Isku xidhka buugga: awood ka qaadista dhagaha Marka LED-ka ee dhagaha dhagaha si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u raadso Haylou-GT2_R / L oo taabo taleefanka gacanta si aad isugu xirto.
Ku soo oog dacwada adoo adeegsanaya fiilada USB-ga. Laydhku wuxuu iftiimin doonaa casaan adag markii uu amrayo oo wuu rogmanayaa o markii uu kor u kaco.
Warshad dayactir maalinle ah
Fadlan ha ku maydhin dhagaha. Ha xidhin iyaga maalinta roobka. Ha uga tagin mashiinka dharka lagu dhaqo ama xaaladaha kale ee daran. Ku nadiifi maro qalalan ka dib markaad isticmaasho inaad sii wadato noloshaada dheer.
Fadlan lacag ka qaad badeecada, haddii ay dhacdo in aan la isticmaalin in ka badan laba toddobaad.
Fadlan isticmaal xeedho shahaadeysan.
Ha xidhin sameecadaha dhegaha muddo dheer si aad u ilaaliso maqalkaaga.
Ha xidhnayn samaacadaha dhegaha xaalad kasta oo leh khataro ka iman kara maxaa yeelay xidhitaankoodu wuxuu yareeyn karaa aragtidaada adduunka ka baxsan.
Haddii sameecadaha dhagaha aysan si fiican u shaqeyn, fadlan tixraac talaabooyinka soo socda si dib loogu cusbooneysiiyo wershadda: samee dhegaha maqalka kiiska. Awood o sameecadaha dhagaha ka dibna ku dheji MFBs labada dhagoodba qiyaastii 15s (LED wuxuu bilig yeeli doonaa casaan iyo cadaan laba jeer laba jeer). Intaas ka dib, dib ugu celi kiiska. Tirtir diiwaanka isku xirnaanta taleefanka gacanta ka hor inta aan la baaraan qaadin mid kale (Dhammaan diiwaanada isku xirnaanta ee la xiriira dhagaha maqalka dhammaantood waa laga saari doonaa).
Audio kaliya wax soo saarka ka soo maqalka hal
Waa kiis dhif ah. Fadlan dib udeji sameecadaha dhegaha, ka saar rikoodhka isku xirnaanta taleefankaaga gacanta oo dib ugu xiro sameecadaha taleefankaaga gacanta.
Dhibaatooyinka kale ee lacag-bixinta
LED-gu wuxuu u ifayaa si cad cad 1 daqiiqo markii dhegaha la saaro.
Dacwada qaadistu wax lacag ah kama qaadi doonto dheg-dhegaha, haddii baytarigeedu dhammaado. Laydhka kujira kiiska qaadista ayaa damin doona marka dacwada kor loo qaado. Haddii aad mar labaad ka dallacdo, LEDs ma bixin doonaan wax ogeysiis ah, taas oo macnaheedu uusan ahayn in dacwadda aan lagu soo oogin.
Kahor intaadan isticmaalin dhagaha, fadlan si taxaddar leh u aqri buuga oo u hayso tixraacyada mustaqbalka.
Sameecadaha dhagaha ayaa loo baahan yahay in si buuxda looga dalaco ka hor isticmaalka waqtiga-koowaad
Haddii sameecadda dhagaha la daayo iyada oo aan la isticmaalin in ka badan laba toddobaad, fadlan dib u soo cusbooneysii xilliyo.
Fadlan isticmaal xeedho ay sameysay soo saare aqoon leh.
5 Haddii headset-kaaga uusan ka heli karin taleefankaaga, fadlan hubi inay ku jirto hab isku dhejin ah iyo in kale; haddii aan xirnayn muddo dheer, sameecadda ayaa ka bixi doonta habka lammaanaha, fadlan dib u gal qaabka; khaladaadka nidaamka fa ee taleefankaaga ayaa dhacaya, dib u bilaabi haddii qalad habraac ah oo ku saabsan madaxa, dib u bilow ama dib u cusbooneysii.
Address: Suite 1303,1305 iyo 1306,13 / F, Erayga Mashruuca 2 ee Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 Longiii Road, Bulshada Zhouxi, Degmada Nancheng, Magaalada Dongguan, Guangdong, Shiinaha.
saaraha: Dongguan Liesheng Elektaroonigga CO., Ltd.
Walxaha halista ah iyo waxyaabaha ku jira shayga
Notes: Fadlan diyaarso inaad si habboon u isticmaashid waqtiga maxaa yeelay maqalkaaga waxaa laga yaabaa inuu waxyeello u geysto adoo isticmaalaya qalabka muddo dheer.
Ka dambeeya & Taageerada
12 bilood ka dib iibsiga (fadlan si fiican u hayso risiidkaaga)
Adeeg Bilaash ah:
Haddii wax cillad ah oo tayo leh ay dhacaan inta lagu jiro muddada damaanadda, fadlan qaado rasiidka oo la xiriir shirkaddaada si aad u hesho adeegga dabo galka.
Kiisaska soo socda ama wixii waxyeelo / cilado ah ee aan sabab u ahayn arrinta tayada kuma jiraan dammaanadda.
Cilladaha ama waxyeelada ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ah, korantada aan caadiga ahayn ama xaqiiqooyinka kale ee deegaanka.
Kala-daadis kasta oo aan loo fasaxin, wax ka beddel ama wax ka beddel qaybo.
Waxyeello kasta oo ay keento adeegsi aan habbooneyn oo ah badeecada oo ay ku jiraan qooyn, xoqid, hoos u dhac, isku xoqid ama soo gaadhis heerkul aan caadi ahayn ama qoyaan.
Buugga Isticmaalaha Dhagaha ee Haylou T15 TWS BT Guudmarka Buugga Haylou T15 TWS BT Guudmarka Dhagaha Dhagaha ...
Buugga Isticmaalaha Haylou T17 TILMAAMAHA ISTICMAALKA DALKA 'Wireless Earbuds' Model: Haylou T17 Guudmarka Sidee ...
Buugga Isticmaalaha Haylou Smartwatch DIIWAANKA ISTICMAALKA Haylou Smart Watch Dulmarka Guud Maxaa kujira Sanduuqa ...
Buugga Isticmaalaha Dhagaha ee Haylou GT1 Pro TWS ISTICMAALKA TILMAANTA TILMAAMAHA TWS 'Guudmarka Guud' Haylou GT1 Pro Maxaa ...
Buugga Dhagaha ee Haylou GT1 TWS BT Haylou-GT1 TWS BT Dhageystayaasha Guudmarka Dulinta Buugga Kiiska Maxaa kujira ...
Haylou GT1 TWS Buugga Isticmaalka Dhagaha Bluetooth Buugga Isticmaalaha TWS BT Dhagaha DhagahaHaylou-GT1 Dulmarka Dacwadda Kiiska Maxaa ...
Posted byfazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Posted inHaylouTags: GT2, Haylou, TWS BT Dhagaha
Buugga Isticmaalaha Haylou T17
Buugga Isticmaalaha Onn Soundbar
FURRION Sanduuqa Qaybinta Hawada oo ay ku jirto Buugga Isticmaalka Buugga Isticmaalka Manual
3 Port HDR HDMI Buugga Isticmaalaha Isticmaalka
Tilmaamaha Beddelka Ethernet Desktop Tenda 9-Port 10 / 100M
D-Link AC1300 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Tilmaamaha Isticmaalaha Router
Buugga Isticmaalaha Conbro Mini WiFi Dash Cam
Supremo LM on JBL Go2 Buugga
Jim Enright on Buugga Waxbaridda ee Koretrak Watch
Maxine Britt on Tilmaamaha Tilmaamaha Jimicsiga Fitness Sport (Nooca Mareykanka)
Don on NVK Buug Tababarka Eyga Tababarka
Buugaagta +, Kibir ku shaqeeya by WordPress.